Etu aga - esi nweta ọtụtụ B2B na - eduga na ọdịnaya | Martech Zone
Onye isi ahia ahia (CMO) Council bidoro a ihe omumu ohuru na-eche banyere otu ahia ahia nwere ike isi mee ka ndi ahia ruru eru site na ikwenye ọdịnaya idu ndú echiche - ọrụ egosiwo na ọ bụ mgba maka ndị ahịa taa. N'ezie, naanị 12% nke ndị na-ere ahịa kwenyesie ike na ha nwere engines ahịa ọdịnaya na-arụ ọrụ dị elu nke na-akwadoro nke ọma iji lelee ndị na-ege ntị ziri ezi na ọdịnaya dị mkpa ma kwenye.
Isi mmejọ ndị na-emetụta ọnụọgụ nke nbudata ma ọ bụ ndebanye aha gụnyere:
48% nke ndị na-ere ahịa anaghị emepe ahaziri ọdịnaya maka ndị na-ege ntị.
48% nke ndị ahịa ahịa bụ n’itunyeghi oke ego iji mepụta ọdịnaya na-ekwenye ekwenye.
44% nke ndị ahịa ahịa bụ emepụtaghị ọdịnaya dị mkpa ma ọ bụ nwee nghọta nye ndị dị iche iche.
43% nke ndị ahịa na -emepụta ọdịnaya nke ahụ ịghara iru ndị na-eme mkpebi ziri ezi n'ofe nzukọ.
39% nke ndị ahịa ahịa bụ Adịghị leverage ụzọ nkesa ziri ezi na ohere iji mezuo iru.
B2B Lead Generation na Ọdịnaya Na-achọ Omume Kasị Mma
Jiri usoro nkesa na usoro njikọ dị irè.
Kesaa ọdịnaya gaa na ọdụ data dị na ihe ndị ọzọ.
Mepụta ọdịnaya na-azụlite ọdịnaya.
Kwado ọdịnaya iji lelee ndị na-ege ntị.
Mee mmekorita zuru oke n'etiti ahia na ire ahia.
Mmụta ahụ, Ebute Ogo Na-enyere Gị Aka Tolite, na-achọpụta ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị otu olu na ihe mejupụtara ahịa ahịa n'ezie. Ha na ndi otu ahia na ndi otu na azumahia na-eme nke oma imekota ihe ha choro, usoro na ihe mmado.
Akụkọ ahụ na-egosipụta nchoputa site na nyocha nke ndị na-ere ahịa n'ọkwa dị elu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, na mgbakwunye na ajụjụ ọnụ na ndị isi ahịa na IBM, SAP, Thermo Fisher Scientific, OpenText, CA Technologies na Informatica. Nnyocha ahụ na-enye ihe omimi miri emi, nke ọma banyere etu esi ejikwa usoro azịza ahịa ọdịnaya, etu esi atụ ọrụ arụmọrụ, yana ogo ogo dị na ngwugwu, kwalite ma jikọta ya iji wepụta usoro ndu kacha mma.
Tags: b2bb2b ahia ahiab2b ndu ọgbọb2b ndu nurturingb2b ndu uzob2b na-edugaKeducmo kansul
Kumar Rohit kwuru
Sep 22, 2015 na 6: 09 AM
Ederede dị omimi. Ọ ga-amasị gị ịgụkwu isiokwu ndị yiri ya. Daalụ
Douglas, obi dị gị ụtọ ịchọta blọgụ gị na akụrụngwa yana uru ha niile. Ahaziri ọdịnaya, lekwasịrị anya na-ege ntị, B2B na-eduga, ndị a niile dị mma ma chọọ echiche. Kedu ihe bụ echiche gị banyere ịnyefe usoro a na ụlọ ọrụ B2B ndị na-ebute ụzọ ha gbadoro ụkwụ mejuputa ihe dị n'elu n'otu isi mkpọsa? Ana m ele igbe igbe, bant.io na leadgenius. Daalụ maka enyemaka gị.
Ndewo John! Nke a ga-abụ oke mkparịtaụka nke anyị Obodo MarTech - biko sonyere ma biputere ya!
Ọnye na -bụ Tyler Schultz?
Enwere m mmasị na nyocha nke batara na post a. Inwe ihe ịga nke ọma na ire ahịa ọdịnaya siri ike karịa ka ọtụtụ ndị ahịa na-atụ anya ya- ọkachasị n'ime obere azụmaahịa nwere obere mmefu ego, ikike na nka.